တရုတ်-အာဆီယံ အနီးကပ်ဆက်ဆံရေးက ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ၊ တည်ငြိမ်ရေး ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအား အထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်း ကမ္ဘောဒီးယားပညာရှင်များ ပြောကြား - Xinhua News Agency
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်းရှိ Kampong Cham ပြည်နယ် နှင့် Tboung Khmum ပြည်နယ်တို့အား ဆက်သွယ်ထားသော မဲခေါင်မြစ်ပေါ် ဖြတ်သန်းဖောက်လုပ်ထားသည့် ၈ စင်းမြောက် ကမ္ဘောဒီးယား - တရုတ် ချစ်ကြည်ရေးတံတားအား မတ်လ ၁၁ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဖနွမ်းပင် ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း(အာဆီယံ) အကြား အနီးကပ်ဆက်ဆံရေးသည် ဒေသတွင်း၌ ငြိမ်းချမ်းရေး ၊ တည်ငြိမ်ရေး နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအား ထိန်းသိမ်းရန် သိသာထင်ရှားစွာ အထောက်အကူပြုကြောင်း ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရှိ ပညာရှင်များက ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်ရှီးကျွမ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ နန်နင်းမြို့၌ ၁၈ ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲ ကျင်းပမှုအား စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်ရှီးကျွမ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ Pingxiang မြို့ရှိ တရုတ်-အာဆီယံ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးဧရိယာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဇုန်၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော အလုပ်သမားများအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၁၅ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ တရုတ်နိုင်ငံ၏ Sinovac COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ သယ်ယူနေသည်ကို နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပညာရှင်များက ယင်းမှတ်ချက်များအား ကမ္ဘောဒီးယားတော်ဝင်အကယ်ဒမီ(RAC) လက်အောက်ရှိ အကြံပေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအဖွဲ့(IRIC)က ပူးတွဲပုံစံဖြင့် စီစဉ်ကျင်းပခဲ့သည့် ၂၁ ရာစုတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အခန်းကဏ္ဍ နှင့် အာဆီယံ နှင့် ဆက်ဆံရေး အပေါ် နိုင်ငံတကာညီလာခံတစ်ခုအတွင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အာဆီယံတို့ရဲ့ အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုက ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေရဲ့ အခွင့်အရေး နဲ့ အကျိုးစီးပွားများအား ထိန်းသိမ်းဖို့ သိသိသာသာအထောက်အကူ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြန်အလှန်နားလည်မှုနဲ့ ယုံကြည်မှုကို တိုးမြင့်လာပြီး ဒေသတွင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တည်ငြိမ်ရေးကို မြှင့်တင်ပေးနေပါတယ်။”ဟု IRIC ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Kin Phea က ပြောကြားခဲ့သည်။
“COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားကပဲ အာဆီယံဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး ကုန်သွယ်ဖက် ဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်ပြီးတော့ တိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်ကို ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားတော်ဝင်အကယ်ဒမီ(RAC) ဥက္ကဋ္ဌ Sok Touch က တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အာဆီယံတို့သည် အာဆီယံဒေသတွင်းဖိုရမ် ၊ အာရှ-ပစိဖိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု(APEC) ဖိုရမ် ၊ အာရှ – ဥရောပ အစည်းအဝေး နှင့် ကုလသမဂ္ဂ စသည့် ဒေသတွင်း နှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ကောင်းမွန်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အာဆီယံတို့၏ ဆက်ဆံရေးသည် မရှိမဖြစ် ဖြစ်ပြီး နှစ်ဘက်လုံးသည် ပိုမိုသာယာဝပြောသည့်ဒေသတစ်ခုအတွက် ဆက်လက်နက်ရှိုင်းစေရေး လုပ်ဆောင်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
RAC ဥက္ကဋ္ဌ Sok Touch က တရုတ်နိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှင့် win-win ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်များ နှင့် အခြားနိုင်ငံများ၏ ပြည်တွင်းရေးတွင် ဝင်ရောက်မစွက်ဖက်ရေးမူတို့အား အလေးအနက် ပြောကြားခဲ့သည်။
“တရုတ်နိုင်ငံက သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်ကို လိုက်နာဖို့ အခြားနိုင်ငံတွေကို ဘယ်တော့အခါမှ အတင်းအကြပ်မလုပ်သလို ဩဇာလွှမ်းမိုးဖို့လဲ မကြိုးပမ်းပါဘူး။”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် ချစ်ကြည်မှု ၊ ရိုးသားမှု ၊ အပြန်အလှန်အကျိုးရှိမှု နှင့် အားလုံးပါဝင်မှု သဘောတရားကို အမြဲတမ်းကတိပြုသည်ဟု ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် အခြားနိုင်ငံများအား လက်ကမ်းကူညီပေးခဲ့ပြီး COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး နှင့် စီးပွားရေး ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန် ၎င်းတို့၏ ကြိုးပမ်းမှုများတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း RAC ဥက္ကဋ္ဌ Sok Touch က ပြောကြားခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့အခင်းအကျင်းတွင် နိုင်ငံစုံပါဝင်ရေး ဝင်ရိုးတန်းကို မြှင့်တင်ရေးအတွက် ကြီးမားသောပံ့ပိုးကူညီမှုများအား ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းလည်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံမှူးကြီး Chang Jian က ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်သုံးခုအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အာဆီယံတို့၏ ဆက်ဆံရေးသည် ထူးခြားအံ့မခန်းသောခရီးတစ်ခုအား ဖြတ်သန်းခဲ့ကြကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အာဆီယံတို့၏ ရှေ့သို့ဆက်တိုးခဲ့သည့် ဆွေးနွေးဖက်ဆက်ဆံရေး နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ကြာမြင့်ပြီးနောက် မိမိတို့သည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၏ အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဖက် နှင့် ပြည့်စုံကျယ်ပြန်သော မဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်များ ဖြစ်ကြောင်း ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများက ရရှိခဲ့သည့် ကာကွယ်ဆေးများအားလုံး၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် တရုတ်နိုင်ငံမှ ဖြစ်ကြောင်း ၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၌ ယင်းအရေအတွက်သည် အထင်ကြီးလောက်စရာ မဟုတ်သော်လည်း ယင်းမှာ သိသာထင်ရှားလောက်အောင်ကို ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ် နှစ်အစပိုင်းတွင် စတင်အသက်ဝင်မည့် ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေးမိတ်ဖက်ဆက်ဆံမှု(RCEP)သည် ဒေသတွင်းသာယာဝပြောရေးကို မြှင့်တင်ရန် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိလာမည် ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံမှူးကြီး Chang Jian က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Close China-ASEAN ties contribute to regional peace, stability, sustainable development: Cambodian experts
PHNOM PENH, Dec. 23 (Xinhua) — Close relations between China and the 10-member Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) have significantly contributed to maintaining peace, stability and sustainable development in the region, experts in Cambodia said on Wednesday.
They made the remarks during an international conference on China’s role in the 21st century and its relations with ASEAN, which was organized inahybrid format by International Relations Institute of Cambodia (IRIC),athink tank under the Royal Academy of Cambodia (RAC).
“Close China-ASEAN cooperation has significantly contributed to upholding the rights and interests of developing countries, increasing mutual understanding and trust, and promoting peace and stability in the region,” IRIC’s director-general Kin Phea said.
“Despite the COVID-19 pandemic, ASEAN is still China’s largest trading partner and has kept the momentum of growth,” he said.
RAC President Sok Touch said China and ASEAN have enjoyed good cooperation in regional and international organizations such as the ASEAN Regional Forum, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) forum, Asia-Europe Meeting and the United Nations.
He said the China-ASEAN relationship is indispensable and both sides need to further deepen it foramore prosperous region.
Sok Touch stressed China’s commitment to peace, development and win-win cooperation, and to the principle of non-interference in the internal affairs of other countries.
“China has never forced other countries to follow its political system, nor sought hegemony,” he said. “China is always committed to the concept of amity, sincerity, mutual benefit and inclusiveness.”
China has givenahelping hand to other countries and playedacrucial role in their efforts to combat COVID-19 and recover economy, he said, adding that China has also made great contribution to the promotion ofamulti-polar world order.
Chang Jian, minister counselor at the Chinese embassy in Cambodia, said that over the past three decades, China-ASEAN relations have gone through an extraordinary journey.
Chang added, “Thirty years after China and the ASEAN forged dialogue relations, we are each other’s largest trading partner and comprehensive strategic partner. Sixty percent of all vaccines received by ASEAN countries come from China, not as impressive as the figure here in Cambodia, but itself already significant enough.”
Chang said he believes the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), when coming into force at the beginning of 2022, will prompt more opportunities to promote the regional prosperity. ■
Photo 1 – Aerial photo taken on March 11, 2021 shows the eighth Cambodia-China Friendship Bridge across the Mekong River, connecting Kampong Cham province and Tboung Khmum province in southeastern Cambodia. (Shanghai Construction Group/Handout via Xinhua)
Photo2– People select goods at the 18th China-ASEAN Expo in Nanning, capital of south China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region, Sept. 11, 2021. (Xinhua/Lu Boan)
Photo3– Workers make electronic products for export atalogistic zone of the China-ASEAN Free Trade Area in Pingxiang, south China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region, on April 15, 2020. (Xinhua/Lu Boan)
Photo4– A batch of China’s Sinovac COVID-19 vaccines are unloaded at the Phnom Penh International Airport in Phnom Penh, Cambodia, Nov. 17, 2021. (Photo by Luo Jun/Xinhua)
မလေးရှားနိုင်ငံ၌ ရေကြီးရေလျှံမှုများကြောင့် သေဆုံးသူအရေအတွက် ၃၃ ဦးထိ မြင့်တက်